IINGCAMANGO EZINGAMA-65 ZELILY TATTOO EZIPHEZULU [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
I-60 ephezulu yeLily Tattoo Ideas [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Abantu bebesoloko befumana iintyatyambo ezi-inki emizimbeni yabo amashumi eminyaka kwaye abantu abaninzi ngakumbi bakhetha ukufumana iitattoo zeenyibiba ngenxa yobuhle bazo kunye nokubaluleka kwazo. Olona manyano luqhelekileyo kunye nenyibiba emhlophe kukuba msulwa nokuba nyulu.
Ukukhula kokuthandwa kweentlobo ezinomdla nezinemibala ezinje nge-lily epinki, inyibiba yengwe, inyibiba yeenkwenkwezi, kunye ne-lily emfusa kuthetha ukuba ezi ntyatyambo zithandekayo zibambe intsingiselo etyebileyo yomfuziselo kwicandelo elibanzi lomnqamlezo wabathandi be tattoo.
Uyilo lwetattoo eboniswe apha zisebenzisa iindlela ezininzi kunye neendlela kodwa zonke zisebenzisa intyatyambo yenyibiba ukwenza iitattoo ezizodwa zeentyatyambo.
1. Ubugcisa beTattoo
Umthombo: @kbeyondthefourhills nge-Instagram
Umthombo: @ daughterofmars.tattoos nge-Instagram
Umthombo: @harryjamestattoo nge-Instagram
Umthombo: @ kristina.mangani nge-Instagram
Umthombo: @ventura_ink nge-Instagram
Ayinguye wonke umntu ofuna a I tattoo yokwenyani yerose okanye intyatyambo ye-lotus. Ngapha koko, njengabanye babazobi abadumileyo bexesha lethu basebenzise indlela engaqondakaliyo emsebenzini wabo abantu abaninzi bakhetha ukufumana ii-tatoo ezikhuthaza kwi-surreal. Njengoko la maqhekeza ebonisa, i-tattoo yenyibiba lolona khetho lufanelekileyo kule ndlela.
Esinye sezizathu zokuba abantu abaninzi bakhethe Uyilo lwe tattoo olungabonakaliyo Kungenxa yenkululeko abayinikezelayo: Ngaba ufuna ii-tiger lily tattoos emkhonweni ogqitywe nge-tiger erhabaxa? Akukho ngxaki. Umzobo osengqiqweni onenyibiba okanye intyatyambo ye-lotus eqhuma entloko? Inokwenziwa.
Nokuba umbala okanye umnyama ungwevu, kunye nomculi weetalente onetalente kunye noyilo loyilo lweetattoo ze-lily ngokuqinisekileyo ziya kujika.
2. Isilwanyana esinesihloko uLily Tattoo Idea
Umthombo: @naleak_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbynicki nge-Instagram
Umthombo: @rensu_tattoo nge-Instagram
Umthombo: ayatkayatatt nge-Instagram
Umthombo: @katbjorky nge-Instagram
Umthombo: @magictattoopozega nge-Instagram
Abantu sele befumana ii-tattoos zezilwanyana kangangeenkulungwane; enyanisweni, ezinye zeetatoo ezindala ezakha zarekhodwa yayizizilwanyana. Iindidi zezilwanyana kunye neesimboli ezinxulumene nazo zibenza bongeze kakhulu kuyo nayiphi na uyilo lwe tattoo, kwaye ii-lily tattoos azikho.
Ngelixa abantu abaninzi banokucinga ngokufaka ibhabhathane okanye ungqatyana kwi-lily tattoo ezi ziqwenga zibonisa ukuba ngenxa yokuba iyitattoo yeentyatyambo ayithethi ukuba inikezelwe kwizilwanyana ezintle.
Into enomdla kukuba, uninzi lwezi lily Uyilo lweetatto zibonisa iinyoka , Ukudala ubume bengqondo obuzisa ezingqondweni zoMyezo wase-Eden ngelixa isibheno sengonyama emnyama nengwevu enxibe isithsaba seentyatyambo ayinakuphikwa.
3. ILily Lily, ebekwe ngokukodwa
Umthombo: @nerotattoostudio nge-Instagram
Umthombo: @daisyhestertattoo nge-Instagram
Umthombo: @ lucyfer_tat2 nge-Instagram
Umthombo: @bamorganictattoo nge-Instagram
Umthombo: @ karina.minitattoo.minsk nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbynacho nge-Instagram
Umthombo: @ katy.hayward.art nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbyabbyrose nge-Instagram
Kukho izinto ezininzi ekufuneka zivavanywe xa kujongwa i-tattoo entle ye-lily. Ukubekwa yinto ephambili ekudaleni isiqwenga somzimba sobugcisa. Le yenye yemfuneko yomzobi we tattoo olungileyo: ukuqonda imigca yomzimba- kwintombazana okanye inkwenkwe- kunye nendlela uyilo lwe tattoo oluya kubeka ngayo eluswini. Oku kusizisa kwezi tattoos zeenyibiba zikhethekileyo zisetyenziswe ngasemva nakwicala lomzimba.
Ngelixa kungengenxa yokutyhafa kwentliziyo — umqolo kunye neembambo zaziwa ngokuqaqamba — isiphumo esenziwe xa itattoo yentyatyambo isebenzisa oku kubekwa ilungile. Olu luvo lwe tattoo luyanda ngokuthandwa phakathi kwabafazi, lubonisa ukuba intombazana inzima njengawo nawuphi na umntu xa kuziwa ekuhlaleni esitulweni kunye ne-inked.
4. Ubugcisa beTattoo eMnyama kunye neGrey
Umthombo: @tattoosbymell nge-Instagram
Umthombo: @marie_reverie nge-Instagram
Umthombo: @sivxstorm nge-Instagram
Umthombo: @miersunkarma nge-Instagram
Umthombo: @ origami_t.rex_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ evi.art nge-Instagram
Umthombo: @ tat2chelsea nge-Instagram
Umthombo: @oliviaknappart (igcisa) nge-Instagram
Umthombo: @aliaskyetattoo nge-Instagram
Umthombo: @brittanyfrady nge-Instagram
Ngelixa ihlala isisiseko sefayile ye- IChicano tattoo isitayile, emnyama nengwevu iyaqhubeka nokufumana ukuthandwa ngokubanzi kubuhle obuncitshisiweyo obenziwe yile ndlela inombala omnye.
Ngaphezulu kwaso nasiphi na isitayile esinye, iintlobo ngeentlobo zoyilo lwetattoo kunye neekhonsepthi zinokusetyenziswa ngombala omnyama nangwevu, ukubonelela ngamagcisa e tattoo inqanaba eliphezulu lenkululeko yokuyila xa kuveliswa ii-bespoke tattoos ngale ndlela.
Ebonakaliswe ngomsebenzi ochanekileyo kunye nokufiphaza okuntsonkothileyo, ezi zoyilo zibalaseleyo zibonisa ukuba indlela emnyama nengwevu isebenza ngokumangalisayo xa isetyenziswa kwii-lily tattoos. Ngombulelo kwitalente yomculi ngamnye we tattoo, ezi uyilo zikhethekileyo zabasetyhini azisokoli ngenxa yokungabikho kombala.
Umthombo: @nuclearcheerios nge-Instagram
Umthombo: @patmurdoughtattoos nge-Instagram
Umthombo: @justintattooanart nge-Instagram
Umthombo: @tuantrill nge-Instagram
Umthombo: @jasminekeatstattoo nge-Instagram
Umthombo: @inline_ink nge-Instagram
Umthombo: @ilovebeefstew nge-Instagram
Umthombo: @dvnmya nge-Instagram
Umthombo: @anton_schafer_ nge-Instagram
Umthombo: @kancancostello nge-Instagram
Umthombo: @tattooist_suf nge-Instagram
Njengoko umntu ebenokulindela, abantu abaninzi bakhetha ukufumana intyatyambo eyaziwayo njengelibhulasi esetyenziswe ngemibala eqaqambileyo, ukuze ibe nefuthe elihle. Le ndlela idlamkileyo iluncedo ngakumbi kwii-lily tattoos ezinikezwe iisimboli ezahlukeneyo ezinxulunyaniswa neentyatyambo zemibala eyahlukeneyo.
Inyibiba emhlophe inxulunyaniswa nobunyulu kunye nobumsulwa, obunokuthi buhambelane ngokufanelekileyo nentsingiselo esemva kwitattoo yenyibiba yomntu, nangona kunjalo itatto ebomvu ebomvu efuzisela uthando inokuba ilunge ngakumbi kuyilo lwe tattoo lomnye umntu lily.
Ukwahluka kwemibala kunye neentlobo zeenyibiba sesinye sezizathu eziphambili zokuba abantu abaninzi bakhethe le ntyatyambo ukuba ibe yitattoo yentyatyambo. Ukwahluka kwezi ntyatyambo ezintle kuthetha ukuba kukho uyilo lwe-lily tattoo phaya malunga naye nabani na kunye nemibala eqaqambileyo yindlela elungileyo yokugcwalisa ezi tattoos zeentyatyambo.
6. Uyilo olucekeceke lweLily
Umthombo: @devontucker_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ jello_t nge-Instagram
Umthombo: @huanglintattoo nge-Instagram
Umthombo: @up_tattooer nge-Instagram
Umthombo: @christinaganea nge-Instagram
Umthombo: @lightgrays_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @sevenfoxestattoo nge-Instagram
Umthombo: @jodieahnientattoo nge-Instagram
Umthombo: @fillettes_ nge-Instagram
Ayinguye wonke umculi we tattoo ophila kwaye asweleke ngesibindi oza kubamba inkolo. Ngapha koko, ngakumbi nangakumbi amagcisa asebenzisa oomatshini bale mihla kunye nobuchwephesha bokwenza iitattoo zeentyatyambo eziethe-ethe ezikhumbuza imizobo yeepensile kunye nenyibiba yintyatyambo eyaziwayo ngakumbi kule ndlela yoyilo lwe tattoo.
Ihlala isetyenziswa kusetyenziswa inaliti enye, ezi tattoos ze-lily ezibuthathaka zibonisa ukuba inomdla njani umvambo weentyatyambo. Ngelixa uninzi lwezi ziqwenga zihlola umbala wendlela emnyama nengwevu, imibala ethotyiweyo ikwasetyenziselwa ubuchwephesha ukwenza ifoto enemibala ethatha ezi tattoos ze-lily zibuthathaka ziye kwinqanaba elilandelayo.
Igqibelele kumfazi onothando lweentyatyambo, le ndlela ithambileyo ivumela umculi we tattoo ukuba abonise ngokuchaneka kwabo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha.
7. Ulungelelwaniso lukaLily Tattoo
Umthombo: @ony_eighthelement nge-Instagram
Umthombo: @meganrosetattoos nge-Instagram
Umthombo: @ sa.customink nge-Instagram
Umthombo: @humancanvaswalsall nge-Instagram
Umthombo: @cxrpsertattoos nge-Instagram
Umthombo: @alena_lenom nge-Instagram
Umthombo: @ sarahpeters7art nge-Instagram
Umthombo: @malimalia nge-Instagram
Umthombo: @trickylake nge-Instagram
Abazobi beTattoo bahlala betyhiliza imvulophu ngaphakathi kwendawo yabo, hayi ngokobuchwephesha bezobuchwephesha: iikhonsepthi kunye nobuchule bokuyila iitatto zale mihla ziye zavela kakhulu okoko ii-anchor kunye neentsimbi zomsebenzi wesiko laseMelika apho ukwenza umvambo kwaqala khona eNtshona .
Ubungakanani bolu luvo lubonakalisiwe ngokupheleleyo kwezi tatto zeenyibiba. Ukuphindwaphindwa ngokuchanekileyo kwamakhosazana eDisney, uyilo olumandla lwe-watercolor kunye ne-shipple stipple shading zonke zibonisa iyantlukwano yoyilo lwe tattoo yanamhlanje kunye neentyatyambo ezintle nezinentsingiselo njengokukhuthaza ayothusi into yokuba uyilo lwe-lily tattoo lube nempumelelo.
8. Umgca weLily Ink Ink
Umthombo: @ organic.black nge-Instagram
Umthombo: @iamcharlottelee nge-Instagram
Umthombo: @betaamundy nge-Instagram
Umthombo: @hr_adamson nge-Instagram
Umthombo: @sophieelizabethtattoo nge-Instagram
Umthombo: @carrruuuu nge-Instagram
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibaluleke kakhulu kwiitattoo eyimpumelelo ngumsebenzi womgca. Ngapha koko, ngemigca eyomeleleyo kunye nomxholo onomdla, umculi we tattoo unokwenza uyilo lwe tattoo olunempumelelo ngaphandle kwesidingo sombala odlamkileyo okanye ukufiphaza okuntsonkothileyo.
Le ndlela sele isisitayile sayo sonke, kwaye ezi tattoos ezizodwa ze-lily zibonisa indlela ecoceka ngayo itattoo yentyatyambo xa imigca echanekileyo nehambelana isetyenziselwa ukugqiba uyilo.
Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba ngenxa yokuba uyilo lwe tattoo lutsiba umbala ngenxa yendlela ethobekileyo ayithethi ukuba iyadika. Ngokuchasene noko, kuba ezi tattoos zenyibiba zibalaseleyo zibonisa ukwakheka okunomdla kunye nokubekwa kweengcali ukwenza indlela yazo ye-monochromatic.
9. Umvambo wenyibiba weNeo wesintu
Umthombo: @ jtrip360 nge-Instagram
Umthombo: @jesskerrdoodles nge-Instagram
iinwele zabafana abade bezinwele
Umthombo: @laszlohrozik nge-Instagram
Iitatoo zesiko le-Neo-zemveli zavela kwisikolo saseMelika sakwantu kwaye ngeli xesha isimbo esitsha sigcina umsebenzi oqinileyo kunye nemibala eqaqambileyo ithatha indawo yokukhululeka ngakumbi kwimithetho ngokubhekisele kumba wesifundo kunye nephalethi edla ngokudibana neeTatoo zesiko laseMelika.
Iitayile ze-lily ezikule galari yimizekelo ebalaseleyo yento enokwenzeka xa igcisa le tattoo elinetalente lisebenzisa izinto zoyilo eziqhelekileyo kwi-neo-yemveli eneentyatyambo ezithandekayo. I-tiger lily ehleli ngasemva kwe-Dia de los Muertos skull, i-lily epinki ephethwe ngesandla samathambo, kunye ne-tiger lily eqhuma kwikakayi yonke yenza i-juxtaposition enomdla ethatha ezi tatto ze-lily ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Iifayile zeLily Tattoos
Zithetha ntoni ii-lily tattoos?
Eyona nto ixhaphakileyo kusapho lweenyibiba, inyibiba emhlophe inesiko elide lokuzibandakanya ngokomoya. KwiGrisi yamandulo intyatyambo yenyibiba-igama elo lisuka kwigama lesiGrike elithi lerion — yayingcwele, kukholelwa ukuba yaphuma kubisi lukaHera, ukumkanikazi woothixo bamaGrike.
Kwisithethe sobuKristu inyibiba emhlophe imele ubunyulu bukaMariya oyiNtombi kwaye le ntyatyambo intle kuthiwa ibonisa indima kaMariya njengoKumkanikazi weengelosi.
Ngaphakathi kwenkcubeko yaseNtshona ngokubanzi, inyibiba emhlophe imele ubunyulu, yiyo loo nto ubukho bayo yonke indawo emingcwabeni: inyibiba emhlophe imele umphefumlo womfi ufikelela kwimeko ehlaziyiweyo yobumsulwa ebavumela bangene ezulwini.
Inyibiba ikwayintyatyambo yeminyaka engama-30 yomtshato ehambelana neminye imibutho yokuzinikela nokuthobeka.
Zimela ntoni iintlobo ezahlukeneyo zeenyibiba ezinemibala?
Xa uninzi lwabantu lucinga ngentyatyambo yenyibiba inyibiba emhlophe yesiqhelo ihlala ifika engqondweni, nangona kunjalo kukho iintlobo ngeentlobo zeenyibiba eza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni zemidlalo ezinomdla kunye nokuba nophawu lwazo olwahlukileyo.
Iinyibiba ezipinki zihlala zinxulunyaniswa nothando, imfesane kunye nobufazi, ngelixa inyibiba emthubi ibonisa ulonwabo olulula kunye nobuhlobo. Inyibiba eorenji ihlala isetyenziselwa ukumela imbeko kunye nokuzithemba kwaye iinyibiba ezimfusa zineempawu zokuzingca, isidima kunye nokunconywa okuhlala kunxulunyaniswa nalo mbala wasebukhosini.
Iindidi ezahlukeneyo zeenyibiba nazo ziza neempawu zazo. I-tiger lily, eneentyatyambo zayo ezizodwa ezinamachaphaza aqhele ukudityaniswa nobutyebi, ukuzithemba kunye nempumelelo, ngelixa inyibiba esempuma-apho inkwenkwezi yenye yeentlobo ezahlukeneyo-inxulunyaniswa nokuzalwa ngokutsha okwenza ukuba ibe lukhetho oluqhelekileyo kwimitshato.
Iinyibiba zeCalla kananjalo zinxulunyaniswa nokuzalwa kwakhona, zihlala zisetyenziswa kwiinkonzo zePasika kunye nasemingcwabeni, zibonisa ubunyulu obubuyiselweyo bomfi kunye nokuzalwa kwabo kwakhona ebomini obulandelayo.
Kuzo zonke ezi zizathu nangaphezulu, kubantu abaninzi i-tattoo ye-lily yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhumbula ezi mvakalelo zinamandla.
Ngaba uyonwabele le tattoo yenyibiba yeentyatyambo? Cofa kwikhonkco elingezantsi ukuze ufumane i-inki eneentsingiselo ezityebileyo:
Uyilo lweTatoo yabasetyhini
I-Cherry Blossom Tattoo Iingcamango
Iingcamango zeLotus Tattoo
Uyilo oluMnyama lweTattoo
Iingcinga zePeacock Feather Tattoo
Iimbono zeendleko ezingabizi emadodeni
konke ukubona isandla se tattoo
izimvo zangaphandle zomngxuma wokuhlala
I-tattoo engapheliyo kumnwe womnwe
imibuzo yengqondo ukubuza intombazana